DAAWO:Wasiirka waxbarashada Puntland oo xadhiga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhisay dugsiga Sheekh Xaamud ee Gawore – DMS
HomeWararkaDAAWO:Wasiirka waxbarashada Puntland oo xadhiga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhisay dugsiga Sheekh Xaamud ee Gawore
DAAWO:Wasiirka waxbarashada Puntland oo xadhiga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhisay dugsiga Sheekh Xaamud ee Gawore
Wasiirka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa xariga ka jaray dhisme cusub oo lagu kordhiyey dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Sheekh Xaamud ee magaalada Goawore, kaas oo ay iska kaashadeen dhismihiisa Hay’adda Care International iyo Midowga Yurub.
Maamulaha dugsiga Imaamu Sheekh Xaamud ee magaalada Gowore Maxamed C/salaan ayaa sheegay in dugsigu uu marxalado kala duwan uu soo maray isla markaasna arday badan ay wax ka bartaan, isagoona madaxda dowladda iyo wasaaradaba kula dar daarmay in ay sii xoojiyaan sare u qaadida waxbarashada Puntland.
Wasiirka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey hay’adihii gacanta ka gaystay dhismaha dugsigani, waxaana uu sheegay in dugsiga ee Sheekh Xaamud ay ka garab siin doonaan wax walba oo u baahan yahay.
“Aad baan ugu faraxsanahay inaanu saaka xadhiga ka jarno aniga iyo Ambasador Midowga Yurub ee Soomaaliya iskuulkakan oo ay inoo hirgaliyeen Midowga Yurub oo shaqadiisa ay qabteen Hay’adda Care aad iyo aad bay u mahadsan yihiin”. Sidaasi waxaa yidhi wasiirka waxbarashada Puntland.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Mr. Ambasador Garrido Ruiz oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Puntland iyo Midowga Yurub ay iska kaashan doonaan horumarinta waxbarashada Puntland isla markaasna qorshaha kobcinta aqoontu uu sii socon doono.
Dugsiga Sheekh Xaamud
Wasiirka Wasaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland Siciid Maxamed Xasan oo xariga ka jaray dhismaha cusub ee dugsiga sare Sheekh Xaamud
Posted by Dalmar Media on Thursday, 21 March 2019
Wasaarka arrimaha Puntland oo soo bandhigay shuruudaha laga rabo musharaxiinta gollaha deegaanka
DEG DEG:Qarax goor dhoweyd ka dhacay Muqdisho